I-Cedars Cottage emithathu kwisiXeko sase-Spring, eUT
Ipholile, i-rustic cottage kwimbali yaseSpring City UT. Ibekwe kwimisedare ejonge kwiNtaba yeHorseshoe, le yindlu yoovulindlela ecocekileyo, eqaqambileyo ehlaziyiweyo ngelixa igcina umtsalane wayo.
Kwintlambo ebukekayo iyure enesiqingatha emazantsi eSalt Lake City, le yindawo ezolileyo ethandekayo ukuthatha ithuba lobugcisa kunye nelifa lemveli leSpring City- ukunyuka kunye nokuhamba kwimiwonyo yalapha kunye nokufikelela ngokukhawuleza kwiindlela ze-Skyline Drive ATV. Kwimizuzu nje yeKholeji ye-Snow kunye netempile entle yaseManti.
Le cottage inamagumbi amabini okulala phezulu. Enye enebhedi elingana neQueen, enye ineebhedi ezimbini zesingle. Kukho igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu. Ikhitshi inayo yonke into oyifunayo ukulungiselela ukutya kunye namashwamshwam. Kukho ikofu kunye neti ekhoyo. Kukho i-wifi elungileyo kwaye iindwendwe ezininzi zisebenza kude. Kwakhona yonwabele i-smart TV kunye neencwadi, imidlalo kunye neepuzzle.
IsiXeko saseSpring zidweliswe kwiRejista yeSizwe yeendawo zeMbali. I-Das Cafe yaziwa kakhulu ngokutya kweJamani okugqwesileyo okukhoyo e-Utah--inika isidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini. Art Galleries kunye ice cream kunye nevenkile Burger line Main Street kwaye kukho amakhaya imbali entle enika umdla kwi stroll ngokusebenzisa edolophini. Iintsuku zeLifa leMveli ngasekupheleni kwentwasahlobo, imibhiyozo yoSuku loVulindlela ngoJulayi, umthendeleko webluegrass ekuqaleni kuka-Agasti, kunye noMthendeleko woBugcisa beSixeko saseSpring ngasekupheleni kuka-Agasti zimbalwa zeziganeko zendawo. IMaple Canyon ikumgama nje wemizuzu engama-20 ukuze iqhayise ngokwakheka kwamatye okumangalisayo kunye namathuba anyukayo. Kwaye ungalibali ATVing kunye snowmobiling.
Ipholile, i-rustic cottage kwimbali yaseSpring City UT. Ibekwe kwimisedare ejonge kwiNtaba yeHorseshoe, le yindlu yoovulindlela ecocekileyo, eqaqambileyo ehlaziyiweyo ngelixa igcin…